Md Xasan Sheekh oo la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee Nairobi. – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta la kulmay jaalliyadda Soomaaliyeed ee deggan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Kulanka ayaa inta badan looga wada hadlay ammaanka Soomaalida ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi oo Soomaalidu ay maalmihii ugu dambeeyey ka cabanayeen dhibaatooyin ay u geystaan ciidamada ammaanka ee Kenya.
Sheekh Shakuul oo u hadlay jaalliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ayaa ka sheegay kulanka in ciidamada Kenya ay waayahan dambe dhibaatooyin cul-culus u geystaan Soomaalida, gaar ahaan xaafadda Islii oo ay deggan tahay inta badan Soomaalida ku nool Nairobi.
Sheekh Shakuul ayaa intaas ku daray in loo baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka joogtada ah ee lagu hayo Soomaalida.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay waxa ka dhacay Nairobi ee loo geystay Soomaalida, wuxuuna xusay inuu kala hadlay madaxweynaha Kenya sidii wax looga qaban lahaa.
Xasan Sheekh ayaa ku boorriyey jaalliyadda Soomaaliyeed ee Kenya inay la shaqeeyaan hey’addaha ammaanka si looga hortago kooxaha qaska ka wada xaafadda Islii.